Iindaba -Iglasi enomsindo, iZibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, Uyazi konke?
Ukwakha iglasi yeSilk-Screen
Iglasi egobileyo egobile
Iglasi yokuPrinta kwidijithali
Itafile yeglasi ephezulu
Iglasi yegumbi lokuhlambela
IBhodi yokuCoca iglasi
KwiGlasi yeSilk-Screen Glass
Iglasi yeglasi yeLouver
Iglasi ye-Smart kunye nePdlc
Iglasi yeSipili esinoBala
Iglasi eNkulu enkulu
Iglasi enomsindo, Izibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, Uyazi konke?
Iglasi enomsindo luhlobo lweglasi yokhuseleko. Ngapha koko, ikwaluhlobo lweglasi exinyiweyo. Ukonyusa ukomelela kweglasi, iindlela zekhemikhali okanye zomzimba zihlala zisetyenziselwa ukwenza uxinzelelo kuxinzelelo kwiglasi. Xa iglasi ifakwa kumandla angaphandle, uxinzelelo lomphezulu luyasuswa kuqala, ngaloo ndlela kuphuculwe umthamo wokuthwala kunye nokunyusa ukumelana nomoya weglasi uqobo. Ukwabelana ngesondo, ukubanda nokushushu, ukothuka njalo njalo.
Iglasi enobulali yindlela apho iglasi yokudada ekumgangatho ophezulu ifudunyezwa kufutshane nendawo yokuthambisa, kwaye umphezulu weglasi upholile ngokukhawuleza, ukuze uxinzelelo oluxinzelelweyo luhanjiswe kumphezulu weglasi, kwaye uxinzelelo lokuqina lukwisiseko sendawo. Ngenxa yoxinzelelo olulinganayo olulinganayo lokucinezelwa, uxinzelelo lwethrensi olwenziwe ngoxinzelelo lwangaphandle luyaconjululwa ngoxinzelelo olunamandla lweglasi, ngaloo ndlela kukonyusa ukhuseleko lweglasi.
Iglasi enobulali inezi zinto zilandelayo:
1. Amandla: Amandla oomatshini, ukumelana nefuthe kunye namandla okugoba kweglasi emva kokubila kunokufikelela kumaxesha ama-4-5 eglasi eqhelekileyo.
2. uzinzo thermal kuphuculwe: iglasi wobulali uyakwazi ukumelana umahluko lobushushu enkulu ngaphandle kokonakala, kwaye ukumelana umahluko lobushushu umahluko amaxesha kathathu ukuba iglasi edadayo eziqhelekileyo ukutyeba efanayo. Ngaba ukumelana utshintsho lobushushu ka-150 C, kunempembelelo ebalulekileyo ekuthinteleni ukuqhekeka thermal.
Ukhuseleko oluphuculweyo: Emva kokuba iglasi enomsindo yonakele, iya kubonisa ngokukhawuleza amasuntswana amancinci e-butus-angle, ngaloo ndlela yandisa ukhuseleko lomntu. Izicelo: Ifanitshala, izinto ze-elektroniki kunye nezombane, ulwakhiwo, ishishini lokuhombisa, amagumbi okuhlamba, iimoto, izinyuko ezinyukayo, kunye nezinye iindawo apho ukhuseleko kunye nomoya weeyantlukwano zifuneka ngokukodwa, kwaye zinokusetyenziswa njengefilimu yoqobo yokufaka iglasi kunye neglasi elaminethiweyo.
Sebenzisa: Isinyithi esisicaba kunye neglasi enobushushu egobile yeyokukhusela iglasi. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwiminyango yokwakha ephezulu kunye neefestile, iindonga zeglasi, iiglasi zokwahlula ngaphakathi, ukukhanya kwesilingi, ukufikelela kwindawo yokujonga indawo, ifenitshala, iiglasi zokugcina izinto njalo njalo.
Ukusilela kunye nokusilela kweglasi enomsindo:
1. Emva kokuba iglasi enomsindo ayinakuphinda isikwe kwaye yenziwe, iglasi inokuqhubekeka kuphela kubungakanani obufunekayo kunye nemilo ngaphambi kokucaphuka, emva koko ucaphuke.
2. Nangona amandla eglasi enomsindo omelele kunala kwiglasi yesiqhelo, iglasi enomsindo inethuba lokuzikhulula (ukuziqhekeza) xa umahluko wobushushu utshintsha kakhulu, kwaye iglasi eqhelekileyo ayinakho ukuzidubula.
Emva kokuthotywa kweglasi, amandla oomatshini weglasi aphindwe kathathu ukuya kwelesi-5 ngaphezulu kunalawo aqhelekileyo, kodwa iikona zeglasi enomsindo ziethe-ethe kwaye zinokuqhekeka emva kokuba ziphantsi kwemikhosi yangaphandle. Ukongeza, ukuba iqondo lobushushu langaphandle litshintsha rhoqo, iglasi enobushushu nayo inokuziqhushumbisa.
Ingcango endala kunye nomnyango kunye nefestile kukhumbuza wonke umntu ukuba xa usebenzisa iimveliso zeglasi ezinobushushu, ulumke ungangqubeki kwikona. Kuyacetyiswa ukuba ungenzi ubushushu beglasi butshintshe kakhulu ngexesha elifutshane ukunqanda ukuziqhushumbisa. Ukongeza, isahlulo esiphakathi seglasi enomsindo yeyona yomeleleyo, kwaye iikona ezine kunye nemiphetho zezona zibuthathaka.
Ukuba kukho imeko engxamisekileyo, iglasi enomsindo inokuqhekeka kwaye ibaleke. Eyona ndlela ilungileyo kukubetha imiphetho kunye neekona zeglasi ngesando sokhuseleko okanye amanye amaqhuma abukhali, ngakumbi embindini womphezulu weglasi. Nje ukuba iglasi ineentanda, kulula ukuba uyitshitshise yonke iglasi.
Ixesha Post: Mar-18-2020